Afafka Qalaad iyo Aqoonta. W/Q: Axmed Iid Aadan
Monday March 23, 2020 - 13:47:44 in Articles by Hadhwanaag News
Nin baa beri nin kale oo ay saaxiib ahaayeen ku yidhi:
"Waar horta ‘hebel’ in uu wax soo bartay ayuu waa hore inoo sheegaye, maxaynu maalin uun u arki weynay isaga oo afafka Carabiga ama Ingiriisiga mid uun ku hadlaya?” Ninkii su’aashaa la weydiiyey jawaab toos ah ma uu bixin, hase yeesho ee wejigiisa waxa laga garan karayey in uu weydiinta u bogay una qaatay mid macquul ah oo in la isweydiiyaa ay gar tahay.
Ninkii markii uu sheekadii dhammeeyey waa uu iska tegey. Daqiiqado yar ka dib ayuu mid raggii uu u warramayey ka mid ahaa yidhi, "Waaryaadhaheen, ninkan hadda inaga tegey ee sarkaalka inoo sheegtay in uu sarkaal ahaan jiray ma run baa?” Dabadeed weydiintaa si toos ah asxaabtiisii ugama ay jawaabin, ee isagii ayay dib u weydiiyeen sababta uu su’aasha ku keenay. Isagiina waxa uu ku jawaabay, "Intii uu inoo sheekaynayey oo dhan marna afkiisa kama aynaan maqal kalmad af kale ah sida Carabi ama Ingiriisi!
"Maanta waxaan hayaa war degdeg ah oo xukuumadda Soomaalilaan ku saabsan”.
Laakiin haddii aan isla weedhaas sidan hoos ku qoran u dhigo waxa la ii aqoonsanayaa "aqoonyahankii qarniga”!
"Maanta (today) waxaan hayaa war degdeg ah (breaking news) oo xukuumadda Soomaalilaan (the government of Somaliland) ku saabsan.”
Maahmaah Faransiis ahayd oo aan mar meel ka akhriyey ayaa waxa ay u dhignayd sidan: "Ninka laba af yaqaannaa waxa uu u dhigmaa laba nin”. Sidaa darteed, iyada oo aanu qofku afkiisa dayacayn ama liidayn in uu afaf kale wax ka bartaa waa wax-ku-ool. Haddii kale oo uu qofku afkiisa oo keli ah ku koobnaado waxa uu noqonayaa sida qof go’doon ah oo haddana dhego xidhan oo kale!